Imephu ezingabonakaliyo, ingcebiso yam ukuba ifundwe - Geofumadas
Maps Invisibles, icebiso lam ukufunda
Meyi, 2012 Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, ezintsha
Incwadi yeMephu engabonakaliyo iya kukhutshwa kwiveki ezayo. Umsebenzi onomdla owenziwa nguJorge del Río San José, apho enza indlela enomdla kwisihloko esithi, nangona indala (imephu), ivele ngokubonakalayo kwiminyaka yakutshanje, ngakumbi ngenxa yokusetyenziswa kwayo kumacandelo ekhompyuter, kwi-Intanethi nakwiindawo ezibonisa geomarketing. .
Incwadi izama ukunceda abaxeli bezithombe kunye nabasebenzisi bebala ukuba baqonde ubudlelwane phakathi kwezoluleko ngoku eziza kusicinezela -nesisombululo-Ukucwangcisa kanjani ishishini kunye nokusasaza ulwazi. Kule nto, izihloko ezahlukeneyo ezinxulumene neemephu, ukusebenza kweinjini yokukhangela, iinethiwekhi zentengiso kunye nentengiso ye-Intanethi ziqwalaselwa.
Kumnandi ukubona imixholo esekwe kwimixholo esiyithandayo, kwaye phantse nangamagama thina ngokwethu esinokwakha. Okumnandi ngakumbi kukwazi ukuba kukho abo batyala ixesha labo ekucwangcisweni koxwebhu lolwazi ukuba namhlanje unethamsanqa lokulahlwa emva ko itegi yexabiso Iya ngasemva. Le ncwadi ngaphandle kokuvula ipanorama ngesihloko esiphila kuyo mihla le, iqinisekisa indawo yokuboniswa ekubhekiswa kulo mxholo: isivumela ukuba sazi okungakumbi, sinxibelelanise imixholo apho sasinemibono kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto sigcine bubble okomzuzwana kuya kuba njalo kwiminyaka emibini -okanye ngaphantsi-. Kukuzuzwa kwenkqubo yesixokelelwano, ethatha ikhredithi yokuchaza umzuzwana kwabanye imihla ngemihla; Ndingathanda ukuyithelekisa noxwebhu olufanayo olulungiselelwe amashumi amathandathu, xa iimephu zingenalo ugcino lwedatha zaba yimisebenzi yobugcisa eyinyani, zikhawulelwe kumda oshicilelweyo kodwa ngokuqinisekileyo bakonwabisile ngamandla esiwenzayo ngoku ngalo mzuzu
Ngamafutshane, umzamo olungileyo, umxholo IIMAPHI ENGABONAKIYO Inxalenye yemibuzo emibini:
Esokuqala ngumthamo omkhulu wokuvelisa umxholo we-cartographic esincedayo namhlanje sibonga kubuchwepheshe obunjenge-GIS, iinkqubo ze-GPS kunye neerosorer ezikude. Yinto entsha ngokupheleleyo. Siyakwazi ukuyila iimephu ngokulula, kwaye ngendleko ephantsi kakhulu yeyunithi kunalo naliphi na elinye ixesha embalini. Ukusetyenziswa kwedatha kunye netekhnoloji yoyilo kuyasivumela.
Iziphumo kukuba uninzi lwazo alwahlukanga kakhulu kwabanye: yindawo yokuvelisa yemephu ebunjiweyo, yeemveliso ezilandelelweyo.
Iparadesi yesibini sisiphumo se-Intanethi. Abaphulaphuli bonyukile, kodwa ukudalwa komxholo ongaphezulu, kungoko ingqalelo ingamali yimali entsha, inqabile elungileyo, kungoko iimephu zethu, njengeminye imifanekiso zingena kukhuphiswano olunzima. Imephu azisengawo umxholo owahlukileyo wokuphiliswa, ngena kwiimpawu kunye nexesha elininzi kukhuphiswano olunzima nazo zonke iintlobo zemifanekiso: ukusuka kwiifoto ukuya kwi-infographics. Imephu yenziwa yontlalontle kwi-Intanethi kwaye ingomnye umfanekiso.
Isisombululo sokungaziwa kwemephu sibandakanya ukudalwa nokwenziwa kwezicwangciso zokusasazwa kwe-Intanethi.
Ndishiya isalathiso ukwandisa umdla wakho.
IPARADOX YAMAPHEPHA AYABONAKALAYO
1 Imephu ezingabonakaliyo izolo nanamhlanje
2 Imephu yemifanekiso indima entsha yemephu kwi-intanethi
IMephu, UMZEKELISO KWI-INTERNET
3 Ngaba iimephu zinomdla?
4 Ixabiso lemephu: Amandla abasebenzisi
5 Imephu iswele imaphu
6 Imephu zenkonzo kunye neemephu zemveliso
7 Kwi-Intanethi, kwi-basilica entsha yeemephu
8 Amanani osetyenziso lwemifanekiso yemephu kwi-Intanethi
IMAP, UMXHOLO kwi-INTERNET
9 Isicwangciso sokuthengisa
10 Uyilo lwemephu
11 Uyilo lwe-Intanethi
12 Ukuqondwa kwemephu
14 Isicwangciso sokusasaza
I-SEO kunye ne-MAPS ukukhangela kweinjini.
15 Ukubonakala kwemephu
16 Imephu kunye nokubonakala kwetrafikhi
17 Ukugcwala kwemephu yewebhu
18 Ukuchwetheza kwabafundi kwimephu kwi-Intanethi
19 Ukusuka kwi-basilica ukuya kwiforum yemephu
20 Ukuveliswa kwemephu: ubungakanani be-agoragraphic agora
21 Kutheni upapasha imephu njengomfanekiso?
22 Imifanekiso kaGoogle kunye neemephu
23 Iimbono zokusetyenziswa kwe-SEO ngemephu
I-SMO NEEMephu. Ukuphuculwa kwenethiwekhi yezoluntu
24 Ukutyhilwa kweemephu kunxibelelwano lwasentlalweni
25 Imephu ezikwi-Twitter
26 Imephu kwiinethiwekhi zentlalo
27 Iimephu kwiikhathalogu zemifanekiso
28 Iimephu kwiWikipedia
29 Imvume yokusetyenziswa kwemephu
I-30 Landela ulwazi lwe-cartographic kwi-Intanethi kumanyathelo e-4
31 Imithombo yolwazi kwiimephu ezikwi-Intanethi
Ikhathalogu yezenzo ezilungileyo kwimifanekiso kaGoogle
Okwangoku ndinenyhweba yokuyibona njenge-scoop, kodwa ukuba ufuna ukwazi ukuba ungalufumana phi oluprintiweyo okanye apho unokufumana khona ingxelo yedijithali, ndincoma ukuba ulandele umbhali:
Kwi-Twitter kwi-akhawunti @orbemapa
En Orbemapa.com lelinyathelo elize ngoku neWordPress esasisazi njengeMundomapa kwiBlogger. Apha ungabona eyona ifundwayo e-Orbemapa.
Post edlulileyo«Edlulileyo Uphi na abasebenzisi gvSIG
Post Next Hlala u phefumlelwe! Ileta kubasebenzi bamOkulandelayo "